Hab fudud si ay u gudbiyaan Xiriirada in macruufka
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay macruufka
Iyada oo horumar iyo caan qalabka Apple, dad badan u nugul inay hantiyaan hal ama labo qalabka Apple, sida iPhone, iPad iyo iPod. Haddii ay dhacdo in aad hesho mid ka mid ah, idinka baryayaa laga yaabaa in ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay macruufka. Si kastaba ha ahaatee, xiriirada tafatirka mid mid ku saabsan qalabka macruufka waa shaqo cajiib ah u adag, gaar ahaan marka aad leedahay xiriirada kala duwan.
Xaaladdan oo kale, Waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin ah qalab telefoonka kala iibsiga, Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac , taas oo gabi ahaanba samayn karaa kala iibsiga xiriir ka Android inay macruufka 9/8/7/6/5 si fudud oo waxtar leh.
Fadlan raac tallaabooyinka hoose. Waxa ay sahlan. Iyaga Read oo waxaad ku baran doontaa sida loo wareejiyo xiriirada ka Android inay macruufka.
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare MobileTrans
First of dhan, rakibi MobileTrans on your computer. Waxaa Launch si ay u muujiyaan ka MobileTrans uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Isku telefoonka aad Android iyo qalab Apple inay computer
Next, labada telefoonka aad Android iyo qalab Apple xidhmaan computer. Marka ay ku xiran yihiin, MobileTrans iyaga lagu ogaan doono sida ugu dhaqsaha badan.
Intaa waxaa dheer, in aad ku banneyn kartaa xiriirada telefoonka caga adigoo gujinaya "data Clear hor nuqul".
Fiiro gaar ah: Waxaad hubisaa in aad ku rakibtay Lugood on your computer.
Tallaabada 3. Transfer xiriirada Android inay macruufka
Markaas, marka aad salaadda dhamaysatona tallaabooyinka kor ku xusan, ka saar marks ka hor fariimaha qoraalka ah, music, sawiro iyo videos. Markaas, guji "Start Copy". Dabcan, xasuuso inaad haysato telefoonada aad ku xiran waqtiga oo dhan.
Si wanaagsan baad yeeshay! Xiriiro hadda jira ee aad iPhone.
Si aad u la yaab leh, version daaqadaha u ogolaanaya in ay u gudbiyaan xiriirada Symbian in Android / macruufka aad. Ka sokow, ka duwan kaga dayanayaan by daruur taas oo aan ammaan oo dhan data, waxay gebi ahaanba waa khatar la'aan iyo waa inuusan marna laga badiyay xogta aad inta lagu jiro kala iibsiga.